Fanavaozana ny toekarena boribory ao amin'ny EU | Option Austria
ny Karin Bornett 10. Oktobra 2019, 11: 10
Ecopreneur dia ONG miainga avy any Belzika izay misolo tena mihoatra ny orinasa 3.000 manerana ny Vondrona Eropeana, izay ny fiarovana ny tontolo iainana no tena ivon-kevitra. Ao amin'ny fandinihana "Circular Economy Update" dia mandinika ny toe-java-misy ankehitriny amin'ny fampandrosoana ny toekarena mivezivezy ao amin'ny firenena mpikambana rehetra ny fototry ny tondro marika ary amin'ny fanangonana fandraisana andraikitra mifanaraka amin'izany.
Mifangaro mifangaro ny valiny. Ny iray mamaky ao amin'ilay tatitra hoe "Ny firenena sy faritra sasany no mitarika ny lalana, toa an'i Netherlands, Skotlandia, Slovenia, France, Belzika ary Finlande". Ny ohatra tsara dia i Suède koa miaraka amin'ny tahan'ny VAT ambany sy ny fampihenana hetra alaina amin'ny fanamboarana sasany. "Ny sasany dia manao fandrosoana mahavariana, toa an'i Italia, izay nampitombo ny tahan'ny fanodinana fandaniam-pako amin'ny tanàna avy any amin'ny 17 ka 45 isan-jato hatramin'ny 2001," hoy ny mpanoratra. "Ary ny sasany dia vao nanomboka ny dia, toa an'i Chypre, Greece, Malta ary Romania."
Ny soso-kevitra momba ny fanatsarana dia omen'ny mpanoratra ihany koa: ohatra, ny fampihenana na famongorana ny VAT amin'ny serivisy fanamboarana ary fampiasa indray ny entana ary fampiroboroboana ny fikarohana sy ny fampandrosoana manodidina ny toekarena boribory.
Ho an'ny tatitra ao amin'ny rohy eto ambany.
Sary avy amin'i Dana Vollenweider on Unsplash
Previous article Fantatrao ve fa nandritra ny hetsika naharitra nandritra ny fotoana tsy ela isika dia ilay Augeni feno herisetra izay ...
Lahatsoratra manaraka Aufgetischt! Zon'olombelona amin'ny takelaka sakafo maraina
in Alternative sy hevitra, Ny fanjifana maharitra, Aotrisy
Mpisava lalana amin'ny indostrian'ny fifanampiana
Faly er, izahay nahazo alàlana ny volo sy ny volo CULUMNATURA valo ...
Fantatrao ve fa nandritra ny hetsika naharitra nandritra ny fotoana tsy ela isika dia ilay Augeni feno herisetra izay ...
Aufgetischt! Zon'olombelona amin'ny takelaka sakafo maraina